Tiany ho lasa paradisa ny tany ka hiaina mandrakizay eto isika, ary hiadana sy ho faly.
Mety hieritreritra ianao hoe ahoana no hetezan’izany. Milaza anefa ny Baiboly fa ny Fanjakan’Andriamanitra no hanao izany. Tian’i Jehovah hianatra momba an’io Fanjakana io sy izay iriny ho antsika ny olona rehetra.—Salamo 37:11, 29; Isaia 9:7.
Toy ny ray tsara fanahy maniry izay hahasoa an-janany ny Raintsika any an-danitra, satria tiany ho sambatra mandrakizay isika. (Isaia 48:17, 18) Mampanantena izy fa ‘haharitra mandrakizay izay manao ny sitrapony.’—1 Jaona 2:17.
Tiany hankatò azy isika.
Milaza ny Baiboly fa te “hampianatra antsika ny lalany” ny Mpamorona antsika, mba “handeha amin’ny atorony isika.” (Isaia 2:2, 3) Nanangona olona “hitondra ny anarany” izy, mba hampahafantatra ny sitrapony eran-tany.—Asan’ny Apostoly 15:14.
Tiany hiara-manompo azy isika.
Miray saina sy tena mifankatia ny olona miara-manompo an’i Jehovah. (Jaona 13:35) Iza ankehitriny no mampianatra ny olona hanao izany? Ho hitanao ato amin’ity bokikely ity ny valin’izany.
Miaraha mianatra Baiboly aminay. Efa mianatra Baiboly amin’ny Vavolombelon’i Jehovah ve ianao? Raha mbola tsy mianatra ianao, dia manandrama satria maimaim-poana izany. Hifandray akaiky amin’Andriamanitra ianao amin’izay.
Mangataha boky. Raha te hahazo boky amin’ny fiteninao ianao, dia afaka miresaka amin’ny Vavolombelon’i Jehovah, na mankany amin’ny efitrano fivorian’izy ireo eny akaikinao. Hanampy anao hahay Baiboly izany.
Jereo ny tranonkalanay ao amin’ny Internet. Afaka mamaky Baiboly ao ianao. Misy boky sy gazety amin’ny fiteny 700 mahery azonao vakina na atao pirinty koa ao. www.jw.org